तीन कम्पनीको लिलामी शेयरमा आवेदन दिने बुधवार अन्तिम दिन | गृहपृष्ठ
Home लगानी तीन कम्पनीको लिलामी शेयरमा आवेदन दिने बुधवार अन्तिम दिन
on: २४ पुष २०७५, मंगलवार १९:०५ लगानी
तीन कम्पनीको लिलामी शेयरमा आवेदन दिने बुधवार अन्तिम दिन
पुस २४, काठमाडौं (अस) । सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र नयाँ नेपाल लघुवित्तले बोलकबोल प्रकृयाबाट लिलामीमा ल्याएको अवितरित हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने बुधवार (पुस २५ गते) अन्तिम दिन रहेको छ ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थापक समूहतर्फको १४ लाख ६१ हजार ९९ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको ४ लाख ९ हजार १ सय ७५ कित्ता शेयर पुस १८ गतेदेखि विक्रीमा ल्याएको हो । बैंकले शेयरको न्यूनतम मूल्य रू. १ सय तोकेको हुँदा सोभन्दा बढीको मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । आवेदकहरुले बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १ सय कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले संस्थापक समूहतर्फको ३ लाख ४४ हजार ९ सय ४६ दशमलव ४४ कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर पुस १० गतेदेखि लिलामीमा ल्याएको हो । कम्पनीले शेयरको न्यूनतम मूल्य रू. १ सय तोकेको हुँदा सोभन्दा बढीको अंकित मूल्य गरी बोलकबोल गनुपर्नेछ । आवेदकहरुले बोलपत्रमा आवेदन दिँदा न्यूनतम १ सय कित्ताको लागि र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको विक्री प्रबन्धक भिवोर क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक समूहतर्फको ४७ हजार ७ सय ६३ कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर पुस १८ गतेबाट लिलामीमा ल्याएको हो । कम्पनीले शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर रू. १ सय तोकेको हँुदा सोभन्दा बढीको मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको विक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १५ वैशाख २०७६)
१५ बैशाख २०७६, आईतवार ०७:४५
लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा ३४ करोडभन्दा बढी
११ बैशाख २०७६, बुधबार १३:२३
लुम्बिनी विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ चैत २०७५)
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:५९
तीन कम्पनीको १६ लाख ४५ हजार कित्ता शेयर सूचिकृत
१८ चैत्र २०७५, सोमबार १३:४४